नीति तथा कार्यक्रम ईतिहासकै लामो, खोक्रो नारा र प्रचारबाहेक केही छैन् : डा. महत | Sabaiko Online
Home Flash News नीति तथा कार्यक्रम ईतिहासकै लामो, खोक्रो नारा र प्रचारबाहेक केही छैन् :...
नीति तथा कार्यक्रम ईतिहासकै लामो, खोक्रो नारा र प्रचारबाहेक केही छैन् : डा. महत
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमाई परिस्कृत नभएको निबन्धको संज्ञा दिएका छन् । उनले भने,‘नीति तथा कार्यक्रम भनेको त आगामी एक वर्षको लागि हो, तर सरकारले धेरै महत्वकांक्षी योजना तथा कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । जसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नै वर्षौं लाग्छ ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षको लागि भएकोले छोटो हुनुपर्नेमा धेरै लामो भएको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘दुई घण्टा लामो भाषण गरियो । यति लामो भाषण त नेपालको ईतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन ।
उनले थपे,‘नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो २५–३० वर्षको ईतिहासमा १६–१७ वटा नीति तथा कार्यक्रम ल्याईसकेको छ । तर, हामीले कहिल्यैपनि नेताका नाममा धेरै कार्यक्रमहरु ल्याएनौं । विपीको नाममा एक÷दुई वटा अस्पताल, शिक्षालगायतका कार्यक्रमहरु ल्यायौं । अरु कुनै घोषणा गरेनौं ।
डा. महतले अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाममा धेरै कार्यक्रमहरु ल्याईएकोप्रति असन्तुष्टि पोखे । उनले भने,‘कतिपय कार्यक्रमहरु त प्रचारमुखी छन् । कतिपय सरकारले गरेका कामका दाबीमा पनि सत्यता छैन् ।’ सरकारले सबैखाले संक्रमणकालिन अवस्थाको अन्त्य भयो भनेर दाबी गरेपनि यसमा कुनै सत्यता नभएको जिकिर गरे । उनले थपे,‘अहिलेपनि संक्रमणकालिन न्यायको काम बाँकी नै छन् । ६ हजारभन्दा बढि उजुरी छ । कानून संशोधन गर्नुपर्छ ।
केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडको पनि समस्या रहेको उनको भनाई छ । उनले भने,‘तीन तहको सरकारबीच अधिकारको विवाद छ । क्षेत्राधिकार के हो ? भन्ने विवाद छ । उनले सविधान कार्यान्वयनको पनि संक्रमण अझै बाँकी रहेको सुनाए ।
सरकारले फजुल खर्च रोक्न नसकेको र बजेटको दुरुपयोग धेरै भएको पनि उनको टिप्पणी छ । चार वर्षअघिदेखि सुरु गरिएको विरगन्ज–रक्सौल पेट्रोलियम पाईपलाईनको कामलाई पनि यही सरकार आएपछि गरेको भनेर अनावश्यक दाबी गरेको पनि महतले आरोप लगाए । सरकार आत्मरतिमा रमाएको र आत्माप्रशंसा गरेको पनि उनले टिप्पणी गरे । उनले भने,‘नीति तथा कार्यक्रममा बढाईचढाई गरेको छ । कतिपय बाँकी काम सम्पन्न भैसक्यो भनिएको छ।
सरकारले संस्थागत क्षमता र कार्यान्वयन क्षमता बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । उनले भने,‘सायद यसबारेमा सरकारलाई जानकारी नै छैन् । त्यसैले सबैभन्दा ठूलो कुरा मुलुकको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्छ । प्रशासनिक क्षमता दिनप्रतिदिन घटिरहेको छ।कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण गरिएको र पार्टीनिकट भएका कर्मचारीहरुलाई मूख्य पोजिशनमा राखिएको पनि उनले सुनाए ।
मुलुकमा सरकारले हल्ला गरेजस्तो सुशासन नभएको पनि उनले आरोप लगाए । उनले थपे,‘अहिलेपनि सुशासनको अभाव छ । नीति तथा कार्यक्रममा पटक–पटक सुशासन छ भनियो । तर, सरकारले भनेजस्तो अवस्था छ ।